नेपाल–चीन सिमानाको १० गजामै तारबार ! – Online Kendra
नेपाल–चीन सिमानाको १० गजामै तारबार !
९ असार २०७९, बिहीबार ०९:४४ OnlineKendra
असार ९,गोरखा । गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिका–१ को रुइला नाकामा चीन सरकारले दुई देशीय समन्वय नगरी तारबार लगाएको छ। सीमानामा संरचना बनाउँदा अपनाउनु पर्ने कुनै पनि मापदण्ड पालना नगरी तारबार लगाएको हो। यस विषयमा न परराष्ट्र मन्त्रालय जानकार छ, नत जिल्ला प्रशासन कार्यालय नै।
Top Headline, राजनीतिनेपाल–चीन सिमानाको १० गजामै चीनले लगायो बार
भक्तपुरमा टिपरसँग ठोक्किएर मोटरसाइकलमा सवार दुई जनाको मृत्यु